Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 23)
HTC U12 +: Astaamaha Cusub ee Xaday iyo Noocyada Price Qiimaheeda sidoo kale!
Maalin kadib soo bandhigideeda, qiimaha iyo qeexida HTC U12 + waa la sifeeyey, mobilada cusub ee reer Taiwan oo suuqa ku garaacaya SD845 SoC, oo leh shaashad tayo sare leh oo aan ka hinaasi doonin wax kale, iyo sifooyin kale taasi waxay shaki la'aan kobcin doontaa iibka sumadda.
Dib-u-eegista Dheecaanka + Foomka Eagle 4K, oo ah kamarad ficil Qiime Yar oo tayo sare leh
Haddii aad raadineyso kamarad ficil wanaagsan, fiican oo raqiis ah, ma seegi kartid dib u eegistaan ​​fiidiyow ee dhameystiran ee Kaamirada Dheecaanka + Foomka, Kaamirada waxqabadka Qiimaha Yar ee u qalanta miisaankeeda dahab.
Xaqiijiyay: Xiaomi Mi 8 waxaa la soo bandhigi doonaa Maajo 31
Waa rasmi: Xiaomi Mi 8 waxaa la soo bandhigi doonaa Maajo 31. Ka ogow wax badan oo ku saabsan soo bandhigida taleefanka cusub soo saaraha Shiinaha ee imaan doona dabayaaqada bisha dhacdada saxiixa.
10-ka Telefoon ee ugu Awooda badan Abriil 2018, Sida uu sheegayo AnTuTu Benchmark
AnTuTu waxay noo keeneysaa liistada boosteejooyinka ugu awoodda badan suuqa bilba bil, taas oo, munaasabaddan awgeed, waxaan ogaan karnaa ku darista Xiaomi Black Shark, casriga cusub ee ciyaaraha ee ay soo saartay dhowr toddobaad ka hor shirkadda Shiinaha. Waan kuu balaarinay!
Nokia X6 waxa lagu iibinayaa 10 ilbidhiqsi gudaha Shiinaha
Nokia X6 waxa lagu iibiyay 10 ilbidhiqsi oo kaliya Shiinaha. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loogu guuleysto taleefanka Nokia cusub suuqa Shiinaha.
Kani waa Samsung Galaxy J8 cusub: qeexitaannada, qiimaha, sawirrada
Waxaan kuu soo bandhigeynaa qeexitaanada iyo astaamaha Samsung Galaxy J8 cusub, oo ah Terminal hadda laga iibiyay Hindiya.
Samsung Galaxy J6: Qeexitaanka soo gelitaanka ee ku saabsan Android Oreo
Samsung Galaxy J6: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee soo galaya nooca Kuuriya, oo maanta la soo bandhigay.
LG Q7, LG Q7α iyo LG Q7 +: Xadka dhexe ee LG waa la cusboonaysiiyay
LG Q7, LG Q7α iyo LG Q7 +: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan moodooyinka cusub ee dhexdhexaadka LG ee maanta si rasmi ah loo soo saaray.
Galaxy S Light Luxury: Nooca Lite ee Galaxy S8
Samsung Galaxy S Light Luxury: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah nooca Kuuriya ee maanta la soo bandhigay
Bixby 2.0, ayaa suuqa ku garaaci doona Galaxy Note 9
Kaaliyaha shakhsi ahaaneed ee Samsung, Bixby ayaa sii deyn doona nooca labaad iyadoo la bilaabayo Galaxy Note 9, oo ah soo bandhigid sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay ee tilmaamaya bisha July.
Xiaomi Mi Max 3 ayaa la bilaabi doonaa bisha July ee sanadkan
Xiaomi Mi Max 3 ayaa suuqa soo gali doona bisha Luulyo. Raadi wax badan oo ku saabsan soo bandhigida taleefanka cusub ee Shiinaha ee si rasmi ah loo soo bandhigi doono xagaagan.
Huawei Y5 Prime 2018: Telefoonka cusub ee Y
Huawei Y5 Prime 2018: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub nooca Shiinaha ee gaadha heerkiisa ugu dhaqaalaha badan.
Galaxy S Light Luxury (Galaxy S8 Lite) ayaa maanta la soo bandhigi doonaa
Samsung ayaa soo bandhigi doonta raaxada Galaxy S Light maanta. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ka raadi sumadda Kuuriya ee maanta bilaabeysa.
Samsung waxay ku madadaalineysaa iPhone-ka iyo 'Batterygate' xayeysiiskiisa cusub
Samsung waxay soo saartay xayeysiin cusub oo ku jees jeesaya Apple. Raadi wax badan oo ku saabsan xayeysiiska cusub ee shirkadda Kuuriya kaas oo qofka ugu tartamaya lagu jeesjeeso.
Xiaomi Redmi 5A wuxuu ahaa midka ugu iibsiga badan adduunka ee Android bishii Maarso
Xiaomi Redmi 5A waa taleefanka saddexaad ee ugu iibsiga badan adduunka. Raadi wax badan oo ku saabsan guusha taleefanka sumcadda Shiinaha oo ah aaladda ugu iibinta badan Android.
Samsung waxay hormarin kartaa soosaarida Galaxy Note 9 ilaa bisha July
Sida laga soo xigtay warbaahinta kala duwan ee Kuuriya, shirkadda Samsung waxay qorsheyneysaa inay horumariso taariikhda soo bandhigida ee Galaxy Note 9 hal bil, halkii ay ahayd bishii Ogosto, waxay noqon doontaa July bilowga taariikhda.
Cusbooneysiinta Oreo ee Galaxy S7 iyo S7 + ayaa mar kale la heli karaa
Laba maalmood ka dib markii laga saaray cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Android Oreo ee Galaxy S7 iyo S7 Edge, shirkadda Kuuriya ayaa horay u hagaajisay qaladka waxayna noo ogolaaneysaa inaan mar kale cusbooneysiino qalabka.
Sharafta 10 ayaa laga iibiyaa maalinta ugu horreysa Yurub
Sharafta 10 ayaa dhammaadkeedii ka dhammaatay maalmihii ugu horreeyay Yurub. Ka ogow wax badan oo ku saabsan guusha ay dhamaadka-sare ee sumcadda Shiinaha ku leedahay bilowgeeda Yurub.
Bixby 2.0 ayaa kuu dheereyn doona oo si fiican kuu fahmi doona
Bixby 2.0 ayaa si dhakhso leh u socon doonta oo sifiican u fahmi doonta isticmaalaha. Raadi wax badan oo ku saabsan hagaajinta lagu soo bandhigi doono nooca cusub ee kaaliyaha shirkadda ee imaan doona sanadkan.
Faahfaahin cusub oo xaday Samsung Galaxy J4 ayaa shaaca ka qaaday
Taxanaha J ee qoyska Samsung Galaxy wuxuu ku dhow yahay inuu helo Samsung Galaxy J4, xubinta cusub ee dhowaan imaan doonta. Maalinba maalinta ka dambaysa, way iska cadahay in dhamaadka hoose ee soo socdaa iman doono, waxayna ku samayn doontaa hab muxaafid ah iyada oo ay ugu wacan tahay astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee moobilkani qalabaynayo.
OnePlus 6 wuxuu maraa imtixaanka ugu caansan ee adkeysiga
OnePlus 6 wuxuu maraa baaritaanka adkeysiga JerryRigEverything. Ka ogow wax badan oo ku saabsan tijaabinta caabbinta caanka ah ee dhammaadka sare ee sumadda Shiinaha ay soo martay.
Soo dejiso waraaqaha sawirada ee cusub OnePlus 6
Maqaalkani waxaad ka heli doontaa waraaqaha cusub ee ka imanaya gacanta OnePlus 6 ee xallintooda asalka ah.
Qiimaha iyo helitaanka Nokia 8 Sirocco ee Spain
Terminalka-dhamaadka sare ee ay Nokia ku soo bandhigtay shirkadda MWC, Nokia 8 Sirocco, ayaa ugu dambayntii leh taariikhda iyo qiimaha laga heli karo Spain.
Samsung waxay ka iibin kartaa processor-ka Exynos shirkadda ZTE
ZTE wuxuu wadahadal kula jiraa inuu iibsado processor-rada Samsung Exynos. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xiriirada u dhexeeya labada shirkadood ee saxiixi kara heshiis ku saabsan iibsashada processor-ka.
Xiaomi waxay soo bandhigi doontaa taleefankeeda cusub bisha May 31
Xiaomi waxay soo bandhigi doontaa alaabooyin cusub May 31. Ka ogow wax badan oo ku saabsan soo bandhigida dhacdada sumcadda Shiinaha ee isu diyaarinaysa soo bandhigida alaabooyin cusub.
ASUS Zenfone Live L1: Nooca heerarka cusub ee soo-saarka
ASUS Zenfone Live L1: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow wax badan oo ku saabsan nooca taleefanka cusub ee heerka gelitaanka ee horay uga bilaabanaya Aasiya.
HTC U12 + gabi ahaanba waa la dusiyay
HTC U12 +: Naqshadeynta iyo qeexitaannada ayaa soo ifbaxay ka hor bandhigga. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan dhamaadka sare ee sumadda ee la soo bandhigi doono toddobaadka soo socda oo tan aan horeyba u ogaanay dhammaan faahfaahinta.
Moto 1S waxaa laga bilaabay Shiinaha oo leh SD450
Motorola, oo ah shirkad ay leedahay Lenovo, ayaa hada ka hirgalisay dalka Shiinaha Moto 1S cusub, oo ah terminal leh faa iidooyin na xusuusinaya wax badan oo ka mid ah Moto G6 oo bishii la soo dhaafay la bilaabay Moto G6 Play iyo Moto G6 Plus.
OnePlus 6: qeexitaannada iyo astaamaha shirkadda cusub ee shirkadda
Dhowr saacadood ka hor, shirkadda weyn ee teknoolojiyadda ee OnePlus ayaa soo bandhigtay taleefannadeeda casriga ah ee cusub ... Waxaan ka hadlaynaa OnePlus 6, oo beddelaya OnePlus 5 iyo 5T, laba qalab oo ku dhex yaal 10-ka sare ee AnTuTu oo ah mid ka mid ah ugu awoodda badan, maanta, waxaan ka heli karnaa suuqa.
Netflix ee HDR wuxuu hadda la jaan qaadayaa Sony Xperia XZ2, Huawei P20 iyo Mate 10 Pro
Xperia XZ2, Huawei P20 iyo Mate 10 Pro waxay taageeraan Netflix HDR. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan moodooyinkan mar hore soo saari kara waxyaabaha ku jira xallinta ugu fiican.
Xiaomi E6 waxaa lagu ogaadey Geekbench
Shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya ee Xiaomi E6. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee laga helo nooca Shiinaha oo aan waxba laga ogeyn oo horayba uga soo muuqday Geekbench,
Samsung Galaxy S9 wuxuu helaa laba midab oo cusub
Mar labaad, shirkadda Kuuriya ayaa lagu qasbay inay ka baxdo suuqa cusbooneysiinta Android Oreo mid ka mid ah terminaalkeeda: Galaxy S7 iyo S7 Plus
Samsung waxay joojineysaa cusbooneysiinta Android Oreo ee Galaxy S7
Shirkadda Kuuriyaanka ah ee Samsung ayaa lagu qasbay inay ka saarto server-keeda cusboonaysiinta Android Oreo ee Galaxy S7 iyo S7 Plus.
Galaxy S9 wuxuu dhaafey hal milyan oo unug oo lagu iibiyey Kuuriyada Koofureed
Galaxy S9 wuxuu gaarayaa hal milyan oo unug oo laga iibiyay Kuuriya. Raadi wax badan oo ku saabsan iibka-dhamaadka-sare-sare ee shirkadda Kuuriya, oo iibinaysa gaabis ka yar jiilkii hore.
Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku iibsanno OnePlus 6 si toos ah Amazon
Shirkadda Aasiya ee OnePlus ayaa heshiis la gaadhay shirkadda weyn ee ganacsiga e-commerce ee Amazon, si ay u iibiso calankeeda xiga ee loo maro Amazon.
HTC Baxniintii: Telefoonka Xannibaadda ee Brand
HTC Baxniintii: Telefoonkii Ugu Horeeyay Ee Xannibaada Oo Imaanaya Sannadkan. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka ugu horreeya ee astaanta ee suuqa soo gala sanadkan.
Qiimaha iyo helitaanka sharaf 10 ee Isbaanishka
Haddii aad sugeysay bilowga suuqa Isbaanishka ee Honor 10, waxaad ku jirtaa nasiib, maadaama aad ku heli karto oo keliya 399 euro oo ah nooca 64 GB.
Sawirradii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy J6 waa la sifeeyey
Waxaan ku tusineynaa sawirradii ugu horreeyay ee terminal-ka soo socda ee shirkadda Kuuriya ay qorsheyneyso inay ka bilowdo suuqa: Galaxy J6
Xiaomi horeyba waa magaca saddexaad ee ugu iibsiga wanaagsan Spain
Xiaomi horeyba waa magaca saddexaad ee ugu iibsiga wanaagsan Spain. Ka ogow wax badan oo ku saabsan koritaanka calaamadaha Shiinaha ee waddankeenna, halkaasoo ay horeyba uga mid ahayd kuwa ugu fiican ee wax iibiya.
Insta360 ONE Review: Ku keydi xusuustaada 360º
Waxaan si qoto dheer u falanqeyneynaa oo aan u tijaabineynaa kamaradda Insta360 ONE 360º, oo ah kaamiro si gaar ah loogu talagalay iPhone iyo iPad, taas oo marka lagu daro shaqeynta iskeed u shaqeysa, waxaan ka dhigi karnaa inay la shaqeyso Android iyada oo ay ugu wacan tahay qalab dheeri ah ama khiyaanada aan ku tuso.
Noocyada iyo tilmaamaha farsamo ee Nokia X6 ayaa la muujiyay kahor soo bandhigiddeeda
Dhowr saacadood ka hor, ayaa sifooyinka ugu muhiimsan ee Nokia X6 hadda la sifeeyey, shirkadda casriga ah ee soo socota ee gacanta ku haysa oo ay weheliso naqshad casri ah iyo tayo kale oo caddaynaysa inay tahay heer dhexaad ah. Waan kuu balaarinay!
Ka faa'iideyso dalabyada cajiibka ah ee Lightinthebox ay noogu soo bandhigaan alaabada Xiaomi
Waxaan ku tusaynaa qaar ka mid ah dalabyada ugu xiisaha badan ee aan hadda ka heli karno Xiaomi illaa websaydhka Lightinthebox
OnePlus 6 waxaa laga iibsan karaa Nederland maalinta la soo bandhigayo
OnePlus 6 waxaa laga iibsan karaa Nederland maalinta la soo bandhigayo. Ka ogow wax badan oo ku saabsan soo gelitaanka sumadda suuqa Nederland taleefanka kula jira heshiiskan cusub.
Muujiyay qiimaha ugu dambeeya ee Nokia X6 cusub
Nokia X6: Wuxuu shaaca ka qaaday qiimaha taleefanka ugu horreeya ee Nokia oo leh darajo. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan bartamaha dhexe ee noocyada cusub ee berrito la soo bandhigi doono oo aan horay u ogaanay qiimahiisa.
Ku hel OUKITEL K7 qiimaha ugu fiican ee ugu wacan mahadnaqiddan
OUKITEL K7, oo ah taleefan casriyeysan oo ballan qaadaya ismaamul dhowr maalmood ah oo ay ugu wacan tahay awoodda 10.000 mAh, oo si dhakhso leh u xajinaya, laba kamaradood leh iyo shaashadda 6-inji ah ayaa adiga kuu noqon kara $ 99,99.
Sirin Shaybaarada waxay muujineysaa qeexitaanka Finney, moobilkeedii ugu horreeyay ee ku saleysan Blockchain
Finney waa aalad leh sifooyin u qalma astaan ​​calan. Kani wuxuu leeyahay Qualcomm SoC kii ugu dambeeyay uguna awooda badnaa, intaa waxaa dheer, waxaa wehliya dhowr faa iidooyin kale oo bixiya bedel aamin ah oo lagu kaydiyo kripto. Ogow qeexitaankiisa iyo sifooyinkiisa!
Soo dejiso waraaqaha sawirada ee HTC U12 +
Haddii aad rabto inaad shakhsi ahaantaada casriga ah ula shaqeyso sawirrada cusub ee HTC U12 +, qodobkan waxaan kuugu soo bandhigeynaa suurtagalnimada inaad iyaga soo dejiso ka hor inta aan la soo bandhigin qaybta tigidhada suuqa.
Waxaan horeyba u ogaanay taleefannada Xiaomi ay ka bilaabi doonto suuqa sanadkan 2018
Shaandheeyey magacyada moodooyinka ay Xiaomi suuqa ka bilaabi doonto. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qorshooyinka sumadda Shiinaha ee taleefannadooda horay loo soo saaray.
Shaandheeyey qiimaha labada nooc ee OnePlus 6
Shaandheeyey qiimaha rasmiga ah ee OnePlus 6 markii la bilaabay. Ka ogow wax badan oo ku saabsan qiimaha taleefanka sumadda Shiinaha uu ku yeelan doono daah-furkiisa dukaamada dhowaan.
Xiaomi waxaa ku dacweeyay Coolpad xadgudub sharciyeed
Coolpad wuxuu ku dacweeyaa Xiaomi xadgudub sharciyeed. Wax badan ka ogow dacwadda ay shirkaddu u gudbisay ee ku takri-falidda rukhsadda ee timaadda iyada oo Xiaomi ay ku dhowdahay inay faafiso.
Caddaymaha Galaxy J4 iyo Galaxy J6 ayaa xaday
Faahfaahinta astaamaha soo socda ee Samsung ay ka bilaabi doonto suuqa, horeyba waa loo soo daadiyey, qeexitaannada aan ku tusin doonno qodobkan.
Nubia V18 sidoo kale waxaa lagu bilaabay casaan
Nubia V18 waxaa lagu bilaabay midab casaan cusub. Waxbadan oo ku saabsan nooca cusub ee taleefanka ah kala soco soo saaraha Shiinaha ee dhawaan lagu soo bandhigi doono midab casaan ah.
Shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya ee LG Q7
LG Q7: Noocyada Telefoon ee ugu horreeya ayaa xaday. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan aaladda cusub ka raadi shirkadda Q ee shirkadda oo dhowaan suuqa soo geli doonta.
Motorola wuxuu rukhsad ka helay taleefan la laaban karo oo isu beddelaya kiniin
Motorola waxay leedahay patent loogu talagalay taleefanka laabma. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan telefoonka ugu horreeya ee isku laaban ee sumadda si aad ugu noqoto kiniin ku jira shatigan horay loo diiwaangeliyey.
7da Juun BlackBerry wuxuu soo bandhigayaa BlakBerry KEY2, oo ah jiilka labaad ee KEYOne
Bishii Diseembar ee la soo dhaafay, ka dib dhowr bilood oo dib u dhac ah, BlackBerry KEYOne wuxuu yimid imaatinkiisa Spain, at ...
Xiaomi iyo Nokia ayaa horeyba uga mid ahaa shanta magac ee ugu iibsiga badan Yurub
Ka ogow wax badan oo ku saabsan tirooyinka iibka ee Xiaomi iyo Nokia in hal sano gudahood ay ka mid yihiin kuwa ugu iibsiga wanaagsan Yurub, kana mid ah shanta ugu sarreysa.
Wax soo saarka otomaatiga guriga ee Xiaomi ayaa horeyba ula jaan qaada Kaaliyaha Google
Qalabaynta guriga ee Xiaomi wuxuu la jaan qaadayaa Kaaliyaha Google. Ka ogow wax badan oo ku saabsan ogeysiiskan imanaya goorta sumadda Shiinaha ay soo saarayso wax soo saarkooda Mareykanka.
Google si ay u bilawdo Pixel smartwatch deyrtan
Google wuxuu ka shaqeynayaa Pixel smartwatch kaas oo imaan doona deyrta. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan smartwatch-ka cusub ee sumaddu ku shaqeyneyso.
Mar dambe suurtagal maahan in la cusbooneysiiyo taleefannada ZTE
Telefoonada ZTE ayaa hada heli kara cusbooneysiin. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan dhibaatadan saameyneysa dhammaan isticmaaleyaasha taleefanka ZTE
Wiko View Lite: Qadka dhexe ee cusub oo leh shaashad 18: 9 ah
Wiko View Lite: qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista rasmiga ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan bartamaha dhexe ee noocyada Faransiiska ah ee horay looga heli jiray waddankeenna.
Google Home iyo Home Mini ayaa sanadkan gaari doona Spain
Google Home iyo Home Mini ayaa sanadkaan laga bilaabi doonaa dalka Spain. Ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka ku hadlayaasha smart smart ee shirkadda ee dalkeenna sannadkan.
Xiaomi Redmi S2 waa halkaan. Baro dhammaan qeexitaankiisa iyo astaamaheeda!
Waxaan kuu soo bandhigeynaa Xiaomi Redmi S2, aaladda cusub ee gacanta ku haysa dhowr tayo oo bixiya iyada oo ah heer dhexdhexaad ah oo heer sare ah oo imanaya si uu naftiisa boos fiican uga siiyo suuqa una noqdo iibiyaha ugu fiican ee shirkadda afraad ee soo saarta moobiilka badankood waxay gadayaan Samsung, Huawei iyo Apple kadib.
Blackview BV5800 Pro: taleefanka soo socda ee shirkaddu wali ma iman
Blackview, oo ah shirkadda ugu weyn ee soo saarta taleefannada rooga ah, ayaa soo saari doonta qalabkeeda cusub waxyar ka dib Waxaan ka hadleynaa Blackview BV5800 Pro, oo ah gabagabo hoose oo leh qeexitaanno qaas ah iyo astaamo qeyb badhkood bartanka-bartanka ka gali doona oo khadka tooska ah ka geli doona usbuuca soo socda. Waan kuu soo bandhigeynaa!
OnePlus wuxuu na siinayaa qiimo dhimis dhan 280 euro haddii aan iibsanno OnePlus 6
Shirkada Aasiya ee OnePlus waxay na siisaa qiimo dhimis xiiso leh oo gaareysa 280 euro haddii aan ku wareejino jirkeenii hore ee OnePlus si aan u soo iibsano qaabka cusub.
Qiimaha iyo helitaanka LG G7 ThinQ ee Spain
Calaamadda cusub ee LG, LG G7 ThinQ waa sharad shirkadda Korea ay isku dayday, a ...
ZTE wuxuu joojiyaa iibinta mobilada aduunka si kumeel gaar ah
ZTE wuxuu ka tagayaa iibinta taleefannada gacanta xayiraadda Mareykanka awgeed. Raadi wax badan oo ku saabsan go'aanka soo saaraha Shiinaha oo dhibaato ku ah jiritaankiisa muddada-dheer.
Lenovo ayaa soo saaraysa taleefan sumaddiisu tahay ZUK bisha Juun 14deeda
ZUK wuxuu ku soo laabtay taleefan cusub Juun 14. Raadi wax badan oo ku saabsan ku soo noqoshada sumadda suuqa si rasmi ah iyada oo taleefankeeda cusub oo si rasmi ah loo soo bandhigi doono bisha Juun.
Qalabka Qualcomm ee 845, 660 iyo 636 ayaa hadda lagu hagaajiyay Android P
Soo saaraha ugu weyn adduunka ee soo saaraha, Qualcomm ayaa hadda ku dhawaaqay in processor-yadooda Snapdragon 845, 660 iyo 636 ay hadda la jaan qaadayaan Android P
HOMTOM waxay u dabaaldegeysaa sanad-guuradeedii 5-aad iyadoo qiimo-dhimis gaaraya illaa $ 50 muddo xaddidan!
Homtom waxay ugu dabaaldegeysaa sanadguuradeeda qaab qiimo jaban oo qiimo jaban oo aadan seegi karin! Qiima dhimista ay Homtom na siiso waxay u dhaxaysaa US $ 10 ilaa US $ 50 halkii rasiidh. Tani waxay khuseysaa aalado dhowr ah oo aan ku leenahay Homtom H770, S8, iyo kuwa kale.
The OnePlus 6 waxaa lagu soo bandhigayaa May 16 magaalada London, laakiin mar hore ayuu soo maray Geekbench
Shirkadda OnePlus waxay si rasmi ah u xaqiijisay maalinta bandhigga rasmiga ah ee OnePlus 6, terminal si rasmi ah looga sii deyn doono May 16 magaalada London.
Huawei Y3 (2018) qeexitaannada ayaa la muujiyay
Huawey Y3 (2018): Telefoonkii ugu horreeyay ee Huawei ee wata 'Android Go'. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefankii ugu horreeyay ee Shiinuhu adeegsado Android Go.
360 N7, heer dhexe oo leh batari aad u weyn oo 5030mAh ah ayaa la bilaabay
360 Mobiles wuxuu ku soo bandhigay 360 N7 gudaha Shiinaha qaab, xubin cusub oo ka mid ah buugaagteeda oo loo go'aamiyay waax leh dalabyo dhexdhexaad ah iyada oo ay ugu wacan tahay astaamaheeda iyo qeexitaanada heerka dhexe.
Sharp Aquos R2: Dhamaadka sare ee cusub oo leh Snapdragon 845 iyo kamarad diiradda lagu saaray kaliya fiidiyaha
Sharp wuxuu soo bandhigay Sharp Aquos R2, aalad cusub oo leh tilmaamaha caadiga ah iyo astaamaha dhamaadka-sare. Iyo, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan processor-kiisa Qualcomm Snapdragon 845 iyo qaybo kale, taleefankan casriga ahi wuxuu u yimaadaa inuu la tartamo kuwa ugu adag shirkadaha soo saarayaasha.
Qeexitaannada iyo astaamaha cusub ee BQ Aquaris X2 iyo Aquaris X2 Pro
Shirkadda Isbaanishka ah ee BQ waxay hore u haysataa BQ Aquaris X2 iyo Aquaris X2 Pro oo noo diyaar ah, labada dhexe ee shirkadda oo leh astaamo iyo muuqaalo aad u xiiso badan, iyo sidoo kale awood iyo cajaa'ib leh. Baro iyaga!
Motorola Moto G6 hadda waxaa laga heli karaa Spain
Moto G6 ayaa diyaar u ah in si rasmi ah looga iibsado Spain. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee calaamadeysan ee horay looga bilaabay dalkeenna.
Huawei / Honor ayaa bilaabay Android Oreo Beta oo loogu talagalay 7 moodal
Shirkadda Huawei ayaa hadda u furtay barnaamijka 'beta' Android Oreo beta barnaamijka 7 terminaal, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah moodooyinka sharafta, shirkadda labaad ee shirkadda.
Galaxy S9 iyo S9 + ayaa lagu bilaabay casaan ahaan Shiinaha
Galaxy S9 iyo S9 + waxaa laga heli karaa casaanka Shiinaha. Raadi wax badan oo ku saabsan midabka cusub ee casaanka ah ee dhammaadka-dhamaadka suuqyada Shiinaha ka hela.
Oukitel U19: Midka Xiga ee iPhone X wuxuu imaan doonaa ku dhowaad $ 100
Oukitel U19, terminaal noqon doona taleefan casri ah oo heerkiisu hooseeyo sababo la xiriira astaamahiisa oo gaari doona qiimo ku dhow 100 doolar Sida iPhone X iyo U18, shirkaddu waxay noo xaqiijisay in U19 ay leedahay muuqaal muuqaal ah oo 5.85 inji ah.
Xiaomi Mi 7 wuxuu lahaan lahaa shidma sawir qaadaha hoostiisa shaashadda sida ku xusan kiiskiisa
Shirkadda Shiinaha ee Xiaomi ma nasanayso, waxayna umuuqataa inaan horeyba uheysanay Xiaomi Mi 7 oo diyaar ah, calanka soo socda ee imaan doona, oo aan lahelin akhristaha faraha gadaal sida caadiga ah, laakiin midka shaashada hoostiisa sida Vivo X21, mobilada ugu horeeya ee leh astaantan, ayaa xambaarsan.
Soo qaado Leagoo S9 kaliya 110 euro
Dhowr maalmood, waxaan ku heli karnaa Leagoo S9 kaliya $ 129,99, oo ku saabsan 110 euro, terminal cajiib ah oo na siiya qiimo aad u wanaagsan oo lacag ah.
Xiaomi Redmi S2: Qeexitaannada iyo qiimayaasha ayaa ka dusay Aliexpress
Xiaomi Redmi S2: Sooc, qiimeyn iyo sawirro xaday. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ka raadi astaanta Shiinaha ee xogteeda gebi ahaanba lagu faafiyay Aliexpress.
Vivo Y75s iyo Vivo Y83 ayaa laga caddeeyay TENAA
Vivo Y75s iyo Vivo Y83: Qeexitaannada bartamaha cusub. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefannada cusub ee sumadda Shiinaha ee dhowaan la soo bandhigi doono.
Soosaarida Galaxy J6 ayaa soo socota ka dib markii ay ku daatay bogga taageerada Samsung
Taariikhda rasmiga ah ee la soo saaray ee Samsung Galaxy J6 ayaa soo socota, sida laga soo xigtay boostada bogga taageerada Samsung ee Hindiya iyo Ukraine
OnePlus 6 wuxuu soo bandhigi doonaa dareeraha garaaca wadnaha
OnePlus 6 wuxuu yeelan doonaa dareemaha garaaca wadnaha sida Galaxy S9. Raadi wax badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee ku soo socda taleefanka sare ee ugu sarreeya ee Shiinaha.
Soo dejiso sawirada LG G7 ThinQ
Haddii aad raadineyso waraaqaha sawirada ee cusub ee LG G7 ThinQ, markaa waxaan ku tusineynaa 33 sawir-gacmeedyo gaar ah oo ka yimid gacanta shirkaddan cusub ee shirkadda Kuuriya.
Maamuus 7S: Nooca gelitaanka cusub ee leh shaashadda 18: 9
Maamuuska 7S: Sooc, tilmaam, iyo soo bandhig rasmi ah. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee hooseeya ka raadi sumadda Shiinaha ee suuqa soo gasha bil kadib.
Xiaomi Redmi S2 waxaa la soo bandhigi doonaa 10-ka Maajo
Xiaomi wuxuu soo bandhigi doonaa Xiaomi Redmi S2 10-ka Maajo. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee ka imanaya astaanta Shiinaha.
Soo bandhigid xaddidan oo ah LG V35 ThinQ: LG V30S ThinQ, ma adigaa?
Noocyo kala duwan oo ka mid ah waxa noqon lahaa LG V35 ThinQ ayaa daadanaya. Marka loo eego warar xan ah iyo tuhunno kala geddisan, sidii la filayay, terminal-kan wuxuu la imaan doonaa dhowr horumarin oo ku saabsan qaybta qalabka, taas oo aan kula kulmi doonno SoC ka awood badan, iyo horumar kale illaa iyo inta ay kamaradaha iyo batteriga ka welwelsan yihiin.
Samsung Galaxy S10 waxaa la soo bandhigi karaa Janaayo 2019
Wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya Kuuriya waxay soo jeedinayaan in Samsung ay horusocod samayn karto, hal sano oo dheeri ah, soo bandhigida Samsung Galaxy S10 illaa Janawari sanadka soo socda, iyadoo laga tagayo MWC-da.
Qaar ka mid ah qeexitaanada OnePlus 6 ayaa la xaqiijiyay
The OnePlus 6 ayaa lagu caddeeyay TENAA: Waxaan horeyba u haynay qeexitaankiisa. Raadi wax badan oo ku saabsan dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha ee horay u soo martay shahaadada TENAA.
Kaaliyaha Google ee Wear OS ayaa lagu cusbooneysiiyay astaamo cusub
Kaaliyaha Google ee Wear OS ayaa lagu cusbooneysiiyay seddex qaab. Raadi wax badan oo ku saabsan astaamahan cusub ee ku imanaya kaaliyaha saacadaha casriga ah.
Wiko Jerry 3: Aaladda casriga ah ee cusub ee 'Android GO' oo leh shaashad 18: 9 ah
Wiko Jerry 3: Sooc, qeexid iyo qiimo rasmi ah. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee taleefanka hoose ee hadda la heli karo.
Samsung waxay ahayd soo saaraha iibiya taleefannada casriga ah rubucii ugu horreeyay sanadka
In kasta oo xaqiiqda ah in shirkadda Kuuriya ee Samsung ay suuq ku leedahay Shiinaha wax ka yar 1%, suuqa ugu weyn…
HTC U12 + waxaa la soo bandhigi doonaa Maajo 23
HTC U12 + waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa 23-ka May. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigidda ee dhamaadka-sare sare ee sumadda Taiwanese.
Samsung Galaxy Apps waxay siineysaa boqolaal doolar iibsashada gudaha-app-ka
Galaxy Apps waxay ku siisaa boqolaal doolar iibsashada gudaha-app-ka. Ka ogow wax badan oo ku saabsan dhiirrigelintan dukaanka barnaamijka taleefanka Samsung.
Samsung waxay si rasmi ah u soo bandhigeysaa Galaxy A6 iyo Galaxy A6 +, qeexitaanno iyo astaamo
Shirkada laga leeyahay Korea ee Samsung ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay Galaxy A6 iyo Galaxy A6 Plus oo loo soo mariyay degelkeeda.
Iibinta Galaxy S9 ee Kuuriyada Koonfureed way niyad jabtay
Iibinta Galaxy S9 ayaa ka hoosaysa filashooyinka laga qabo Kuuriyada Koonfureed. Raadi wax badan oo ku saabsan iibka hoose ee taleefanka ee waddankaaga, taas oo niyad jab ku noqotay.
Samsung Galaxy Tab S4 ayaa ku dhow inuu suuqa soo galo
Samsung Galaxy Tab S4 ayaa si dhakhso leh suuqa u soo gali doona. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka kiniinka cusub ee Samsung ee suuqa, kaas oo aan ahayn inuu waqti dheer qaato.
Kiniiniyada ugu fiican ee la siiyo maalinta hooyooyinka
Maalinta Hooyada ayaa soo socota, mid ka mid ah sannadaha ugu khaaska badan, sidee uga wanaagsan oo loogu dabbaaldegaa haweeneydaas nolosha na siisay iyada oo hadiyad la siinayo? Waxaan kuu soo qaadaneynaa dusha sare ee 5 kiniin ee ugu fiican oo leh tayo / qiime aad u fiican si aad u hesho mid ka mid ah.
Xiaomi horeyba waa magaca afraad ee ugu iibinta badan adduunka
Xiaomi waxay ku jirtaa kaalinta afaraad ee ugu iibsiga badan adduunka. Raadi wax badan oo ku saabsan iibka sumcadda Shiinaha rubuca hore ee sanadkan.
Taleefannada casriga ah ee jaban ee la bixiyo maalinta Hooyada
Haddii aadan weli garanayn waxaad iibsanayso si loogu dabbaaldego Maalinta Hooyada, halkan waxaa ku yaal liistada taleefannada casriga ah ee raqiiska ah ee ku habboon hooyadeen inay cusboonaysiiso taleefannadeeda casriga ah.
Google iyo Fitbit ayaa ka shaqeyn doona waxyaabaha xiran ee cabiraya caafimaadka isticmaalaha
Google iyo Fitbit waxay bilaabi doonaan dharka la gashan karo si loo cabiro caafimaadka si sax ah. Raadi wax badan oo ku saabsan qorshooyinka labada shirkadood ee doonaya inay galaan qaybta caafimaadka.
LG G7 ThinQ: Shirkadda-dhamaadka-sare hadda rasmi ah
LG G7 ThinQ: Qeexitaannada, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan dhamaadka sare ee sumadda Kuuriya oo horeyba si rasmi ah loo soo bandhigay.
OUKITEL K7: Taleefanka cusub ee leh batari 10.000 mAh
OUKITEL K7: Qalab cusub oo leh batari 10.000 mAh. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee nooca ee dhawaan la soo bandhigi doono oo u taagan batterigiisa weyn.
Hadiyadaha xiisaha badan ee Maalinta Hooyada
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan xulitaanka hadiyadaha asalka ah ee Maalinta Hooyada, oo aad kula guulaysanayso hooyadaada maalintan gaarka ah. Ha seegin hadiyadan.
WhatsApp ayaa ogolaan doonta wicitaanada fiidiyowga kooxeed
Toddobaadyo, ama bilo gudahood, wicitaanada fiidiyowga ee kooxdu waxay gaari doonaan barxadda fariimaha ee WhatsApp, sida uu ku dhawaaqay Mark Zuckerberg ee F8-ka oo bilaabmay shalay.
Laba nooc oo ka mid ah Galaxy Note 9 ayaa lagu caddeeyay Shiinaha
Laba nooc oo Galaxy Note 9 ah ayaa lagu caddeeyay Shiinaha. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan dhamaadka-sare ee shirkadda oo yeelan doonta laba nooc oo kala duwan.
Taleefannada casriga ah ee ugu sarreeya ee la bixiyo Maalinta Hooyada
Taleefannada casriga ah ee ugu wanaagsan ee la bixiyo Maalinta Hooyada. Soo ogow xulitaankan taleefannada inta u dhexeysa ugu sarreeya ee aad ku bixin karto taariikhdan gaarka ah.
Huawei P20 Pro wuxuu maraa tijaabada adkeysiga ugu caansan
Huawei P20 Pro wuxuu maraa baaritaanka adkeysiga JerryRigEverything. Raadi haddii dhamaadka-sare uu istaago imtixaanka ugu caansan ee internetka.
Android Oreo ayaa hadda loo heli karaa Galaxy S7 iyo S7 Edge
Cusbooneysiinta ku saabsan Android Oreo ee Samsung Galaxy S7 iyo Galaxy S7 ayaa horeyba looga heli karaa Boqortooyada Ingiriiska, sidaa darteed dib uma dhigi doonto inay gaarto dalalka intiisa kale.
Shirkadda Xiaomi ayaa dukaankeedii ugu horreeyay ka furi doonta dalka Talyaaniga 26-ka Maajo
Xiaomi ayaa dukaankeeda cusub ka furi doonta magaalada Milano 26-ka bisha May. Ka ogow wax badan oo ku saabsan dukaanka ugu horreeya ee astaanta Shiinaha ee waddanka transalpine ee imaan doona dhammaadka Maajo.
Samsung Galaxy A6 (2018) iyo Galaxy A6 + (2018) Qiimayaasha iyo astaamaha xaday
Samsung Galaxy A6 (2018) iyo A6 + (2018) waxay muujinayaan qiimahooda. Intaas waxaa sii dheer, astaamihi ugu dambeeyay uguna dambeeyay iyo tilmaamo farsamo oo isku mid ah ayaa sidoo kale la sii daayay, oo xaqiijinaya isla markaana, beeninaya dhowr ka mid ah oo maalmahan wareegayay webka.
Shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya iyo fiidiyowga Xiaomi Redmi S2
Xiaomi Redmi S2: qeexitaannada ugu horreeya iyo fiidiyaha xaday. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee sumadda Shiinaha ee dhowaan laga soo saari doono suuqa.
Xiaomi waxay muujineysaa sawirka koowaad ee Xiaomi Mi Band 3
Xiaomi waxay soo bandhigeysaa sawirka ugu horeeya ee Xiaomi Mi Band 3. Raadi wax badan oo ku saabsan sawirka ugu horeeya ee jijimadda astaanta ee horay u shaacisay naqshada ay yeelan doonto.
Huawei P20 Pro waa shirkadda ugu iibinta badan dhamaadka Yurubta Galbeed
Raadi wax badan oo ku saabsan iibka Huawei P20 Pro ee Galbeedka Yurub halkaas oo ay u noqotay guul u soo hoyashada Shiinaha marka loo eego iibka.
Xiaomi waxay suuqa ku soo bandhigi doontaa laba taleefan oo ay la socdaan Android One
Xiaomi waxay soo saari doontaa laba taleefan oo ay la socoto Android One oo ah nidaamka qalliinka. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshayaasha sumadda Shiinaha si ay u soo saaraan laba nooc oo noocaan ah nidaamka qalliinka.
Samsung Galaxy S9 qeexitaannada firfircoon ayaa xaday
Qeexitaannada Samsung Galaxy S9 Active, oo ah nooca roogga ah ee calanka shirkadda Kuuriyaanka ah ee Galaxy S9, ayaa hadda la faafiyey.
Barnaamijyada ugu fiican ee loogu talagalay Android Wear iyo Wear OS
Shanta barnaamij ee ugu fiican Android Wear iyo Wear OS. Soo ogow xulashada barnaamijyadan aad ku rakibi karto saacaddaada casriga ah.
Fiidiyow xayeysiin ah oo Samsung Galaxy A6 daadanaya
Ka dib markii ay soo daayeen sawirradii ugu horreeyay ee rasmiga ah ee xiga ee A6 iyo A6 +, hadda waa markii ugu horreysay ee fiidiyoow laga helo Samsung lafteeda halkaas oo aan ku arki karno terminaalka
Telefoonka Muhiimka ah hadda waxaa laga iibsan karaa Ingiriiska iyo Faransiiska
Sida shirkaddu u xaqiijisay MWC-da hore, Telefoonka Muhiimka ah waxaana laga iibsan karaa Yurub, ugu yaraan Boqortooyada Ingiriiska iyo Faransiiska, iyo sidoo kale Japan.
Huawei wuxuu ka shaqeynayay nidaam kale oo hawlgal oo loogu talagalay Android
Huawei waxay horumarinaysay nidaamkeeda hawlgalka. Raadi wax badan oo ku saabsan qorshooyinka sumadda Shiinaha ee sameysanayay nidaamkeeda hawlgalka.
Shaandheeyay sawirradii ugu horreeyay ee Nokia X
Naqshadaynta Nokia X ayaa ku daatay sawirradeedii ugu horreeyay. Ka hel macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah shirkadda la soo bandhigi doono bisha Maajo.
Huawei iyo Gal Gadot (Wonder Woman) ayaa nacas iska dhigaya iyagoo ku dhawaaqaya Huawei Mate 10 Pro
Aktarada Gal Gadot iyo Huawei ayaa doqon u ah iyaga oo adeegsanaya iPhone si ay ugu xayeysiiyaan Huawei Mate 10 Pro gudaha Mareykanka.
Motorola waxay rajeyneysaa inay iibiso 30 milyan oo unug oo ah Moto G6
Motorola waxay rajeyneysaa Moto G6 inay iibiso 30 milyan oo unug. Raadi wax badan oo ku saabsan rajada shirkadda ee iibka taleefannadooda cusub.
Huawei wuxuu shaaca ka qaaday inay haystaan ​​74.326 shati oo diiwaangashan
Shirkadda Huawei waxay leedahay 74.326 shati oo ka diiwaan gashan adduunka oo dhan. Raadi wax badan oo ku saabsan shatiyadaha nooca Shiinaha ee iskiis isu taagay inay tahay hormuud hoggaamineed cilmi baarista iyo horumarinta.
The OnePlus 6 wuxuu soo bandhigi doonaa duubitaan fiidiyoow dhaqdhaqaaqa oo gaabis ah
OnePlus 6 wuxuu yeelan doonaa duubitaan muuqaal ah oo gaabis ah. Raadi wax badan oo ku saabsan astaamaha cusub ee taleefanka-dhamaadka sare uu yeelan doono.
Tilmaamo iyo qeexitaanno ka dillaacay HTC U12 Verizon
HTC U12 waa la daadiyay iyada oo ay la socdaan qeexitaankiisa iyo astaamaha ku jira bogga hawlwadeenka Mareykanka ee Verizon. Qalabkan waxaa loo kala saari doonaa inuu yahay shirkadda rasmiga ah ee shirkadda Taiwanese oo ay weheliso nooca ugu awoodda badan, HTC U12 Plus (U12 +), mid kale oo isna wax badan siinayay in laga hadlo.
Qeexitaannada suurtagalka ah ee daadanaya ee kiniiniga Xiaomi Mi Pad 4
Qeexitaanno farsamo oo kala duwan iyo astaamaha kiniiniga Xiaomi Mi Pad 4, oo ah bedelka Mi Pad 3 ee aan aragnay sanadkii hore, ayaa xaday. Tani waxay la imaan doontaa shaashad xiiso leh, oo leh processor xoog leh oo Qualcomm Snapdragon 660 ah oo sideed-xarig ah, iyo in ka badan. Waan kuu sheegeynaa!
Xiaomi waxaa ka go’an inay ilaaliso qiimaha taleefannadeeda
Xiaomi waxay sii wadaaysaa qiimaha taleefannadeeda. Waxbadan ka ogow sababaha shirkadda Shiinaha ay u kordhin weyday qiimaha qalabkeeda.
Shirkadda Huawei waxaa lagu baarayaa dalka Mareykanka
Mareykanka ayaa hada baaraya shirkada Huawei. Ka ogow wax badan oo ku saabsan baaritaanka ay shirkaddu ku socoto Mareykanka si ay ganacsi ula sameyso Iran.
LG G7 ThinQ wuxuu marayaa GeekBench oo leh 4GB RAM iyo Snapdragon 845
LG waxay umuuqataa inay haysato LG G7 ThinQ, oo ah taleefanka casriga ee xiga ee dhamaadka ah ee shirkada fadhigeedu yahay Kuuriyada Koofureed ay dhawaan nagu tusidoonto kaydkeeda balaaran ee mobilada. Qalabkani wuxuu dhowaan soo maray GeekBench, oo ah jaangooyada caanka ah. Waanu kugu balaarinay!
LG waxay xaqiijineysaa astaamaha shaashadda G7 ThinQ
LG waxay xaqiijisay astaamaha muujinta ee calanka soo socda ee G7 ThinQ
Nokia X6 waxaa la soo bandhigi karaa Abril 27
Nokia X6 waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa 27-ka Abriil. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee nooca dhexdhexaadka ah ee la soo bandhigi karo Jimcaha.
Xiaomi Mi 6X hadda waa rasmi: Ogow dhammaan qeexitaankiisa
Xiaomi Mi 6X: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka nooca dhexe ee sumadda Shiinaha oo maanta si rasmi ah loo soo bandhigay.
Xaqiijiyay: The OnePlus 6 waxaa lagu soo bandhigi doonaa Maajo 17 gudaha Shiinaha
The OnePlus 6 waxaa si rasmi ah loogu soo bandhigi doonaa 17ka Maajo Shiinaha. Raadi wax badan oo ku saabsan soo bandhigida taleefanka sare ee dhammaadka bisha Maajo, oo ay horay u xaqiijisay shirkadda lafteeda.
Kani waa mootada cusub ee korontada ee Xiaomi oo ka yar 1.000 euro
Super Soco: Mootada korantada ee Xiaomi oo ka yar 1.000 euro. Ka ogow wax badan oo ku saabsan mootadan korontada ka timid magaca Shiinaha ee dhowaan la bilaabi doono suuqa.
HOMTOM Fans Festival: Ka faa'iideyso qiimo dhimista taleefannada HOMTOM
Ka faa'iideyso qiimo dhimista taleefannada HOMTOM ee TomTop. Ka ogow wax badan oo ku saabsan dallacaadahaas oo aad ku iibsan karto xulashada taleefannada astaanta qiimaha ugu fiican illaa Abriil 30.
Sawirada cusub ee Galaxy A6, hadda kiis la'aan
Sawirrada ugu horreeya ee sida immika Samsung-ka soo socda ee suuqa ku dhacaya noqon doonaa: Samsung Galaxy A6 iyo A6 +
Meizu si uu u furo taleefanka Android Go
Meizu waxay soo saari doontaa taleefanka Android Go sannadkan. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka hoose ee dhamaadka ah ee sumadda Shiinaha ay u soo bandhigeyso suuqa sanadkan.
Sifeeyay naqshadda dhameystiran ee LG G7 ThinQ
LG G7 ThinQ: Naqshadeynta taleefanka ayaa gebi ahaanba xaday. Raadi wax badan oo ku saabsan naqshadeynta nooca-dhamaadka-sare ee sumadda ee durba la dusiyay.
Xaqiijiyay: OnePlus 6 wuxuu yeelan doonaa galaas gadaashiisa
OnePlus 6 wuxuu yeelan doonaa gadaal gadaashiisa oo laga sameeyay muraayad. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan naqshadeynta-dhamaadka-sare ee shirkadda ka samaysan muraayadda.
Saddexda cusub ee Meizu ayaa halkan jooga! Waxaan kuu soo bandhigeynaa Meizu 15, 15 Plus iyo M15
Shalay, Meizu wuxuu soo saaray seddexdiisa telefoon ee cusub. Waxaan ka hadleynaa Meizu 15, Meizu 15 Plus, iyo M15, oo sidoo kale loo yaqaan Meizu 15 Lite, nooca ugu suubban ee labada hore lagu xusay. Baro dhammaan qeexitaannada farsamo iyo astaamaha qalabkan!
POP Wireless iyo Halo Laser Earphones: Dhagaha dhagaha cusub ee Meizu
POP Wireless iyo Halo Laser Earphones: Ka ogow wax badan oo ku saabsan samaacadaha cusub ee ka imanaya astaanta Shiinaha ee sida rasmiga ah loo soo bandhigay dhammaadka wiigan.
OUKITEL WP5000: Taleefanka u adkaysta xaaladaha ba'an ee qiimaha ugu fiican
OUKITEL WP5000: Taleefanka adag ee sicirka ugu fiican. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka sumadda ee hadda lagu heli karo qiimaha ugu fiican ee xayeysiinta ah.
Sawirradii ugu horreeyay ee qaabeynta Samsung Galaxy A6 iyo A6 +
Sawiradii ugu horeeyay ee waxa ay yihiin Galaxy A6 iyo Galaxy A6 + waxay u ekaan doonaan hada oo lagu soo dhex daadiyay muuqaalo laga soo gudbiyay kiis soo saaraha.
Telefoonada casriga ah «gamer» qayb soo kordheysa
Xaqiiqdii waxaad maqashay taleefannada casriga ah ee gamer-ka, taleefannada leh awood dheeri ah oo lagu bixiyo qibrad gameplay ah oo la mid ah ta qalabka.
La kulan Bluboo S3 oo leh dalab bilow ah oo cajiib ah
Kusoo hel Bluboo S3 qiimo aan laga adkaan karin. Waxaad kuheli kartaa taleefan casri ah oo wata 8000 mAh baytari, 6 "shaashad iyo Samsung dual camera oo ah 21Mpx + 5 Mpx wax aad ugayar intaad qiyaasi karto.
LG G7 ThinQ wuxuu lahaan doonaa badhan u gaar ah Kaaliyaha Google
LG G7 ThinQ wuxuu lahaan doonaa badhan u heellan Kaaliyaha Google. Raadi wax badan oo ku saabsan badhanka ku jiri doona taleefanka sare ee sare kaas oo yeelan doona sumcad badan sirdoonka farsamada.
Xiaomi Black Shark ayaa la iibiyay maalintii ugu horeysay ee iibka
Xiaomi Black Shark ayaa laga iibiyay Shiinaha maalintiisii ​​ugu horeysay ee la iibinayo. Raadi wax badan oo ku saabsan guusha taleefanka ugu horreeya ee cayaaraha ee sumadda Shiinaha ee lagu iibiyay dhowr ilbiriqsiyo ah.
Tilmaamaha iyo qeexitaanka Xiaomi Mi 6X sida ku xusan liiska cusub ee TENAA
TENAA waxay soo bandhigeysaa liis cusub oo ku saabsan tayada Xiaomi Mi 6X oo xaqiijineysa isla markaana ka hor imaaneysa kuwa badan oo aan horey u ogaanay. Dhex-dhexaadkan ayaa imaan doona 25-ka Abriil ee soo socota iyada oo loo marayo munaasabad soo bandhigid ah oo shirkadda Shiinaha ee Xiaomi noo diyaarisay.
Sifooyinka Meizu 15, 15 Plus iyo M15 waa la sifeeyey
In ka yar maalin kadib soo bandhigida Meizu 15, astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee qalabkan waxaa lagu sifeeyaa iyadoo ay weheliyaan labadiisa nooc ee kale, Meizu 15 Plus, oo ah heer sare oo leh Samsung Exynos 8895 oo ah sideed-processor processor, iyo Meizu M15, oo ah meel dhexdhexaad ah oo ku qalabaysan SD625 SoC.
LG K11 iyo K9: Noocyada cusub ee soo galitaanka shirkaddu waxay yimaadeen Yurub
LG K9 iyo K11: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefannada astaamaha hoose ee sumadda ee raadinaya inaad cusboonaysiiso heerkooda gelitaankooda.
Waxay ku siisaa qiimo dhimis 60% inta lagu jiro eBay Super Weekend
EBay's Super Weekend wuxuu ku soo laabanayaa dagaalka iyadoo qiimo dhimis ah ilaa 60% qalabka elektarooniga ah ee dhammaan noocyada, gaar ahaan casriga casriga ah ee Android.
Nubia Red Magic: Taleefanka casriga ee cusub ee suuqa ku jira
Nubia Red Magic: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan magaca taleefanka ugu horreeya ee magaca Shiinaha, kaas oo horeyba loogu soo bandhigay munaasabad.
Moto E5, E5 Plus iyo E5 Play: Baaxadda soo gelitaanka Motorola way hagaageysaa
Moto E5, E5 Plus iyo E5 Ciyaar: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Ka ogow wax intaa ka badan oo ku saabsan soo gelitaanka cusub ee shirkadda maanta si rasmi ah loo furay.
Motorola Moto G6, G6 Plus iyo G6 Play: Qadka dhexe waa la cusboonaysiiyay
Moto G6, G6 Plus iyo G6 Ciyaar: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Raadi dhammaan faahfaahinta ku saabsan noocyada bartamaha-cusub ee horay loo soo bandhigay.
Leagoo S10, oo ah mobiil ku biiraya buug-yaraha shirkadda lagu soo bandhigay Ilaha Caalamiga ah ee 2018 ee Hong Kong
Leagoo wuxuu soo bandhigayaa calankiisa xiga, Leagoo S10, mobilada Android-ka ah oo wata kamarad gadaal ah oo sedex laab ah iyo akhristaha faraha oo shaashada hoostooda ah. Intaa waxaa dheer, wuxuu ku soo bandhigayaa qorshayaashiisa suuqa hadda jira, iyo jihada uu u mari doono qaybta tafaariiqda. Waan kuu balaarinay!
Huawei ma qorsheyneyso inay ka iibiso processor-kiisa Kirin noocyo kale
Huawei kama iibin doonto processor-ka Kirin noocyo kale. Raadi wax badan oo ku saabsan go'aanka shirkadda iyo sababta aysan u dooneyn inay ka iibiyaan processor-kooda shirkadaha kale.
Sharaab 10: -Hoorshow-dhamaadka sare ee cusub ayaa hadda rasmi ah
Maamuuska 10: Sooc, qeexitaan iyo rasmi rasmi ah. Ka raadi wax walba oo ku saabsan dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha oo si rasmi ah maanta loogu soo bandhigay Shiinaha. Qeexitaanadiisa, qiimaheeda iyo goorta ay suuqa ku dhacayso.
Nokia 7 Plus hadda waxaa laga helaa Spain
Nokia 7 Plus hadda si rasmi ah ayaa looga iibsan karaa Spain. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee shirkaddu soo bandhigtay ee MWC 2018 iyo inuu horeba ugu sugan yahay Spain.
ZTE waxaa looga tagi karaa Android la'aan xayiraada Mareykanka awgood
ZTE way waayi kartaa ruqsaddeeda Android xayiraadda saaran America darteed. Wax badan ka ogow dhibaatooyinka ay shirkadda la kulantay xayiraadda saaran awgeed.
10-ka taleefan ee ugu awooda badan bisha Maarso 2018, sida uu sheegayo AnTuTu Benchmark
AnTuTu waxay noo keeneysaa liistada boosteejooyinka ugu awooda badan suuqa bilba bil, taas oo, munaasabaddan awgeed, waxaan ogaan karnaa ku darista labada calan ee cusub ee Samsung, Galaxy S9 iyo S9 Plus, casriga casriga ah ee xilligan.
Nubia Z18: Waxaa la sifeeyay qeexitaanka dhamaadka-sare. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha oo qeexitaannadooda horey loo sii daayay.
Samsung waxay soo saartay daabacaad gaar ah Galaxy S9 Formula 1
Vodafone oo kaashaneysa Red Bull iyo Samsung, ayaa soo saaray nuqul gaar ah oo ah Galaxy S9 iyo Galaxy S9 munaasabadda Austrian Grand Prix oo la qaban doono 1-da Luulyo.
Soo bandhigay sawirradii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Xiaomi Mi 6X
Sawiradii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Xiaomi Mi 6X durba waa run. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan naqshadeynta taleefanka sumadda Shiinaha ee horayba loo soo saaray
Warbixinnada Macaamiilku waxay ku kala sarreeyaan Galaxy S9 inuu yahay taleefannada casriga ah ee ugu fiican suuqa
Sida laga soo xigtay hay'adda madaxa bannaan ee Mareykanka, Warbixinnada Macaamiisha, Galaxy S9 iyo S9 + ayaa ah labada taleefannada casriga ah ee ugu wanaagsan ee hadda laga heli karo heer sare.
Samsung waxay shatiyadeeda siisay shaashad dhan-shaashad leh oo xaraarad leh
Samsung waxay xiratay taleefan shaashad dhan-shaashad leh. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan patent-ka cusub ee shirkadda u taagan taleefanka leh darajo.
The OnePlus 6 wuxuu noqon lahaa mid aan biyuhu ka muuqan sida ku xusan fiidiyow cusub
OnePlus 6 wuxuu noqonayaa mid aan biyuhu xirin. Wax badan ka ogow fiidiyowga ay shirkadda lafteeda soo gelisay ee xaqiijinaya in taleefanku noqon doono mid aan biyuhu mari karin
Sony Xperia XZ2 Premium waa rasmi oo leh laba kamarad iyo shaashadda 4K
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta cusub ee Sony Xperia XZ2 Premium, aaladda ugu awoodda badan taxanaha oo dhan
Furashada Oukitel WP5000
Maalmo kahor imaatinka suuqa Oukitel WP5000, waxaan kuusoo bandhigeynaa fiidiyoow aan ku arki karno gabi ahaanba furitaanka xaruntan oo ay weheliso qaar ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee hawlgalka.
Xiaomi Mi A1 oo ku yaal Hindiya
Xiaomi Mi A1 ayaa laga iibiyay Hindiya. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan dhamaadka keydka taleefanka taas oo macnaheedu yahay in Xiaomi Mi A2 uu dhawaan garaaci doono dukaamada.
Maamuuska 10 wuxuu maraa TENAA wuxuuna muujiyaa qeexitaankiisa farsamo
Sharafta waxay umuuqataa inay leedahay Honor 10 oo diyaar ah, dhammaadkeeda xiga ee soosocda oo suuqa ku dhufan doona bisha soo socota iyadoo leh awood oo dhan si loola dagaallamo astaanta kale ee shirkadaha kale iyadoo loo mahadcelinayo astaamaheeda iyo qeexitaannadiisa farsamo ee ay TENAA, jaangooyaha Shiinaha iyo xaqiijiyaha ahi inoo sheegeen. uun baa shaaca ka qaaday. Waan kuu sheegeynaa!
Sawirkii ugu horreeyay ee dhabta ah ee Xiaomi Mi 6X waa kan
Sawirkii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Xiaomi Mi 6X durba waa dhab. Waxbadan oo ku saabsan taleefanka cusub ka raadi sumadda Shiinaha ee dhawaan suuqa laga bilaabi doono waxaana si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa 25-ka Abriil.
HMD Global inay soo bandhigto Nokia X 27 Abriil
Nokia X ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa 27-ka Abriil. Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda daahfurka taleefanka cusub ee aakhirka bishan.
Shaandheeyey sawirkii ugu horreeyey ee Nubia Red Devil
Nubia Red Devil: Sawirkii ugu horreeyay ee taleefanka ciyaaraha ee sumcadda Shiinaha horay ayaa loo soo daadiyay, sidaa darteed waxaan horeyba u ognahay waxa ay tahay inuu taleefanka tuso. In kasta oo aadan wax badan arki karin.
Boosto cusub ayaa xaqiijineysa soosaarida Xiaomi Mi 6X
Boorarka ugu horreeya ee Xiaomi Mi 6X horay ayaa loo soo saaray. Soo ogow boosta ugu horreeya ee xayeysiinta ee taleefanka cusub ee sumadda Shiinaha ee la soo bandhigi doono Abriil 25.
Shaandheeyey qeexitaanka Vivo V9 Youth
Dhallinyarada Vivo V9: Tilmaamaha taleefanka ee la xaday. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka nooca Shiinaha ee la filayo inuu dhowaan suuqa soo galo.
Faahfaahinta farsamada ee Xiaomi Mi 6X sida ku xusan qalabkeeda
Wax ka baro astaamaha farsamo ee Xiaomi Mi 6X sida ku cad sheydan dhowaan soo ifbaxay ee taleefankan, iyo dhowr qeexitaan farsamo iyo astaamo ay sifeeyeen TENAA, jaangooyaha Shiinaha iyo caddeyn kaas oo dhammaan qalabka lagu geyn doono waddanka weyn ee Aasiya maraya. .
Samsung SM-G8850 ayaa ka muuqda AnTuTu oo leh qeexitaanadiisa ugu muhiimsan
Samsung SM-G8850 waxaa hadda lagu daadiyey TENAA oo ay weheliyaan dhowr astaamood oo waaweyn iyo qeexitaanno farsamo oo aan hoos kaga hadli doonno. Kuwa aadka u muuqda, waxaan ka helnaa processor sideed-geesood ah Qualcomm Snapdragon 660, Android 8.0 Oreo, iyo shaashad 2.220 x 1.080 p.
Vernee waxay soo saari doontaa nooc gaar ah Vernee X oo leh 6 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah
Terminalka xiga ee ay bilaabi doonto shirkadda Aasiya ee Vernee waa Vernee X1, oo ah nooc leh 6 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah oo kayar 200 euro.
Xiaomi Black Shark: Astaamaha casriga ah ee cayaaraha ayaa hadda rasmi ah
Xiaomi Black Shark: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefannada casriga ah ee ugu caansan ka soo iibso sumcadda Shiinaha ee maanta lagu dhawaaqay.
OnePlus 5T waxaa laga iibiyay Yurub
OnePlus 5T wuxuu ka dhammaaday Yurub oo dhan. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka horay loogu iibgeeyay Yurub, dhowr toddobaad ka dib markii lagu iibiyay Mareykanka.
Red Devil: Qalabka casriga ah ee Nubia ayaa imaan doona Abriil 19
Nubia waxay soo bandhigeysaa taleefankeeda ciyaaraha ee Red Devil bisha Abriil 19. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka ugu horreeya ee cayaaraha ee nooca Shiinaha oo si rasmi ah loo soo bandhigi doono usbuuca soo socda.
Xiaomi waxay soo bandhigi doontaa taleefankeeda cusub Abriil 25, laga yaabee inay tahay Xiaomi Mi 6X
Xiaomi waxay soo bandhigi doontaa taleefankeeda cusub Abriil 25. Raadi wax badan oo ku saabsan qorshayaasha sumcadda Shiinaha si ay u soo bandhigto qalabkeeda cusub dhammaadka bishan.
Huawei Y6 2018 iyo Huawei Y7 2018: Telefoonada cusub ee Y
Huawei Y6 2018 iyo Huawei Y7 2018: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefannada Y-ka cusub ee ka soo baxa nooca Shiinaha ee maanta la soo bandhigay.
Samsung SM-G8850 ayaa ka muuqda TENAA. Miyuu noqon doonaa Samsung Galaxy S9 Mini?
Dhawaan Samsung SM-G8850, suurtagalnimada Samsung Galaxy S9 Mini ee laga leeyahay shirkadda South Korea, ayaa hadda la faafiyey. Sida laga soo xigtay TENAA, qalabkani wuxuu ku yimid qalab 5.8-inch Super AMOLED shaashad ah QuadHD + qaraar ah oo ah 2.960 x 1.440 pixels, marka lagu daro astaamo kale oo wanaagsan iyo qeexitaanno.
Muuqaal gaaban oo ka mid ah Xiaomi Black Shark ayaa xaday
Maalin ka hor soo bandhigga rasmiga ah ee loo yaqaan 'Xiami Black Shark', fiidiyoow gaaban oo ka hadlaya terminalka ayaa ku sii faafay shabakadda bulshada Shiinaha, Weibo.
Huawei P20 Pro cusub wuxuu helayaa 4 10kiiba XNUMX dib u hagaajin sida ku xusan iFixit
Iyada oo loo marayo gacmaha iFixit, Huawei P20 Pro ayaa hadda maray, terminal hadda helay dhibco aan horay loogu baran.
Shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya ee LG V35 ThinQ
LG V35 ThinQ: Qeexitaannada ugu horreeya ayaa xaday. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaannada ugu horreeya ee astaanta dhammaadka sare ee sumadda ee durba la dusiyay.
Baro liiska taleefannada Android ee la jaan qaadi doona Fortnite!
Fortnite, oo ah mid ka mid ah ciyaaraha ugu caansan xilligan, ayaa shaaca ka qaaday liis ay ku qoran yihiin taleefannada Android oo la jaan qaadi kara ciyaarta waqtiga lagu sii daayo GooglePlay Store. Waan ku ogeysiineynaa!
Dukaanka Google wuxuu joojiyaa iibinta jiilka koowaad ee Pixels
Jiilkii ugu horreeyay ee Pixel hadda laguma iibin Google Store. Raadi wax badan oo ku saabsan dhammaadka iibinta taleefannada ugu horreeya ee shirkadda ee dukaanka rasmiga ah
Samsung Galaxy J7 Duo wuxuu horey ugujiray bogga rasmiga ah ee shirkada
Shirkadda South Korea ee Samsung ayaa horey u haysatay Samsung Galaxy J7 Duo oo diyaar ah, oo ah mobiil dhexdhexaad ah oo horeyba loogu qeexay bogga rasmiga ah ee Samsung India qiime dhan 16.990 Rs. Qalabkani wuxuu la yimaadaa naqshadeynta iyo qaabka caadiga ah ee terminalka taxanaha J ee sumadda. Baro taas!
Waxaan kuu soo bandhigeynaa Nubia Z18 Mini, oo ah bartamaha cusub ee shirkadda
Nubia Z18 Mini, oo ah nooc yar oo ka mid ah Z18, qadka dhex-dhexaadkan ayaa hadda la sii daayay iyada oo ay la socdaan dhammaan faa'iidooyinkiisa iyo faa'iidooyinkiisaba, mana aha wax xun haba yaraatee, maxaa yeelay mahadsanid astaamaheeda iyo faa'iidooyinkiisa, waxay ku taal meel dhexdhexaad ah -macaan. Waan kuu soo bandhigeynaa!
ZTE waxay diiwaangelisaa Axon 9, Axon 9 Pro iyo moodooyin kale
ZTE waxay diiwaangelisaa Axon 9 iyo 9 Pro iyo dhowr taleefanno kale. Raadi wax badan oo ku saabsan liiska taleefannada ay calaamaddu horey u diiwaangashan tahay oo iman doonta dukaamada illaa 2018 oo dhan.
LEAGOO S9: Telefoonka Qoraalka Saxeexa Saxiixa hore $ 1,99
Hore u sii dalbo LEAGOO S9 qiimo dhan $ 1,99. Ka ogow wax dheeraad ah oo ku saabsan dhiirrigelintan gaarka ah taleefanka astaanta Shiinaha ee suuqa dhowaan soo geli doonta.
Honor 7C iyo 7A waxay yimaadaan Isbuucaan toddobaadyo kadib soo bandhigiddooda
Honor 7C iyo Honor 7A waxay yimaadeen, si rasmi ah, Spain, waxaana la heli doonaa iibinta maalmaha soo socda. Labadan aaladood oo leh tilmaamo iyo astaamo isku mid ah ayaa toddobaadyo ka hor laga bilaabay Shiinaha. Waan kuu balaarinay!
LG G7 ThinQ waxaa lagu soo bandhigi doonaa 2-da Maajo magaalada New York
Sida laga soo xigtay OnLeaks, shirkadda Kuuriyada Waqooyi ee LG ayaa si rasmi ah u soo bandhigi doonta LG G7 Thinq 2-da bisha May magaalada New York.
10 sababood oo loo iibsado Oukitel WP5000 cusub
Haddii aad qorsheyneyso inaad cusbooneysiiso taleefankaaga casriga ah, waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad tixgeliso Oukitel WP5000, oo ah terminal fantastik ah oo leh qaar ka badan astaamaha xiisaha leh ee aan ku faahfaahinnay qodobkaan.
Noocyada qaar ee Xiaomi Mi 6 waa la iibiyey
Noocyo dhowr ah oo ka mid ah Xiaomi Mi 6 ayaa horeyba loo iibiyay. Raadi wax badan oo ku saabsan warkan oo macnaheedu yahay in imaatinka Xiaomi Mi 7 uu hadda aad uga dhow yahay sidii hore.
Ka dusay sawirro cusub oo Xiaomi's Black Shark ah
Sawirro cusub oo Xiaomi Black Shark ah ayaa xaday. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka Xiaomi ee suuqa imanaya dhowaan oo abuuraya xamaasad badan.
Lagu shaandheeyey nooca 'ZTE Iceberg': Shaashad leh shaashad labalaab ah
ZTE Iceberg: Waxaa lagu sifeeyay naqshadda shaashad laba jibaar ah shaashadda. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee calaamadaha ah ee layaabka leh adigoo sharad ku galaya shaashadda shaashadeeda.
HTC U12 Plus waxay la imaan laheyd Qualcomm Snapdragon 845 iyo 8GB oo RAM ah sida ku cad daadad cusub
HTC U12 ayaa hadda la sii daayay iyada oo ay la socdaan dhowr ka mid ah qeexitaannada farsamo. Qalabkani wuxuu la imaan doonaa kan ugu fiican Taiwan, taas oo ay mas'uul ka tahay kor u qaadista guusha ay sumaddu mar ku jirtay maalmihii ugu wanaagsanaa. Waan kuu sheegeynaa!
Dillaac cusub ayaa xaqiijinaya qaabka Moto G6 Plus
Daadinta cusub ee sawirrada Moto G6 Plus waxay xaqiijineysaa naqshaddii hore loo daadiyay.
OnePlus wuxuu jiidayaa ugu dambeyntii OxygenOS beta dhammaan moodooyinka la taageero
Ragga ku jira OnePlus waxaa lagu qasbay inay ka baxaan dhammaan wixii loo yaqaan 'Oxygen OS betas' illaa iyo hadda ay ka heli karaan adeegsadayaasha qalabkan iyadoo ay ugu wacan tahay isticmaalka batteriga badan ee ay bixiyaan
Sharafta 10 waxay yeelan doontaa laba taariikhood oo soo bandhigid ah
Sharafta 10 ayaa sidoo kale si rasmi ah loogu soo bandhigi doonaa Shiinaha. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan munaasabadda sumaddu u abaabushay inay ku soo bandhigto taleefanka Shiinaha. Munaasabad la qaban doono Abril 19.
Android 8.0 hadda waa loo heli karaa Galaxy Note 8 ee Spain
Casriyeynta muddada dheer la sugayay ee Android Oreo 8.0 ee loogu talagalay Galaxy Note 8 ayaa hadda si rasmi ah u degtay Spain, markaa orod sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si aad u soo dejiso oo aad ugu raaxaysato wararka ay na siiso
Xiaomi waxay suuqa u soo bandhigi doontaa laba taleefan oo ay la socdaan Snapdragon 670
Laba telefoon oo Xiaomi ah ayaa ka soo muuqan doona Snapdragon 670 oo ah processor-ka. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshayaasha sumadda Shiinaha ee ku isticmaali doona processor-kan laba ka mid ah taleefannadiisa sannadkan.
Naqshadda 'OnePlus 6' ayaa lagu muujiyay qaabab cusub
Shaandheyn cusub oo la sifeeyay oo ah naqshadda OnePlus 6. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka nooca Shiinaha ee dhowaan iman doona suuqa iyo kaas oo lagu sifeeyo sawirrada cusub ee naqshadeynta.
Huawei wuxuu bilaabi doonaa soosaarka Kirin 980 rubuckan
Shirkadda Huawei waxay bilaabi doontaa soosaarka ballaaran ee Kirin 980 rubuckan. Ka ogow wax badan oo ku saabsan qorshayaasha soo saaraha Shiinaha oo ay la socoto processor-kiisa cusub ee dhammaadka-sare leh
Aasaasiga ahi wuxuu horumarin doonaa kamaradda mobilka ugu horreeya ee leh Taleefoonka Muhiimka ah ee soo socda
Taleefanka uu naqshadeeyay aasaasaha shirkadda Andy Rubin, ee loo yaqaan 'Essential Phone', ayaa waxa soo gaadhay cambaareyn badan oo loo jeedinayo kaamirooyinkeeda maxaa yeelay tayada aaladeeda ma fiicna sidii la rabay. Laakiin tani waxay ku saabsan tahay in lagu beddelo casrigaaga soo socda. Waan kuu balaarinay!
Xiaomi waxay rajeyneysaa inay ka badato 120 milyan oo taleefanno ah oo la iibiyey 2018
Xiaomi waxay dooneysaa inay iibiso 120 milyan oo taleefano ah sanadka 2018. Raadi wax badan oo ku saabsan qorshooyinka hami ee shirkadda Shiinaha ee dooneysa inay ka badato xaddigan iibka ah sanadkan oo dhan.
Meizu 15 waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa Abriil 22
Meizu 15 waxaa la soo bandhigi doonaa Abriil 22 si rasmi ah. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha ee la soo bandhigi doono dhammaadka bishaan Abriil.
Soo bandhigtay qeexitaannada ugu horreeya ee Maamuuska 10
Sharaf 10 faahfaahinta ugu horreysa ayaa la muujiyay. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan dhamaadka-dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha ee soo-saaristeeda horeyba loo ogaa oo waxaan horeyba u haysannay faahfaahinta rasmiga ah ee ugu horreysa.
Dhowr qeexitaan farsamo ee Samsung Galaxy A6 waa la sifeeyey
Wax ka ogow astaamaha farsamo ee Samsung Galaxy A6, oo ah laba qalab oo shirkadda South Korea ay horay u sii diyaarisay, oo aan arki karno waqti aad u gaaban. Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta!
Soo dejiso waraaqaha waraaqaha ee Huawei P20
Mar kasta oo Terminal cusub suuqa lagu soo bandhigo, darbiyada waa mid ka mid ah astaamaha loogu doon doonista badan yahay. Maqaalkani waxaan ku tusaynaa dhammaan lacagaha Huawei P20 si aad ugu soo dejiso qalabkaaga.
Samsung waxay bilaabi lahayd 3 Galaxy J3s kala duwan sanadka 2018
Samsung ayaa sii deyn doonta seddex nooc oo ah Galaxy J3 sanadkan. Raadi wax badan oo ku saabsan qorshayaasha shirkadda ee ah inay soo saarto saddex nooc oo taleefanka hoose-dhexe ah sanadkan.
Xiaomi Mi 7 wuxuu lahaan karaa shidma sawirka faraha shaashadda hoostiisa sida uu sheegay agaasimaheeda
Xiaomi Mi 7 wuxuu lahaan lahaa shidma sawirka faraha shaashadda. Faahfaahin dheeraad ah ka raadi fariinta agaasimaha guud ee shirkadda oo sheegaysa in dhamaadka-sare uu yeelan doono aaladda sawirka faraha isku dhafan shaashadda hoosteeda.
Panasonic Eluga Ray 550: Taleefanka cusub ee nooca ayaa laga bilaabay suuqa Hindiya
Waxaan kuu soo bandhigeynaa Panasonic Eluga Ray 550, oo ah terminal leh astaamo iyo faa iidooyin u dhiganta inuu yahay taleefanka ugu hooseeya ee Android. Taleefankan casriga ahi wuxuu ku yimaadaa qalab xoogaa farsamo xumo ah, laakiin lagu hagaajiyay salka salka uu moobilkani ku yimaado. Waan kuu faahfaahinaynaa!
Dib u eeg Xiaomi Mi Note 3
Halkan waxaan kaaga tagayaa, ka dib toban maalmood oo aad u adeegsi xoog leh, dib u eegista fiidiyowga ee ugu dhammaystiran ee Isbaanishka ee Xiaomi Mi Note 3, oo ah dhammaad sare oo ah qiime dhexdhexaad ah.
Samsung S9 Enterprise Edition: Nooca shirkadaha ayaa yimid Spain
Samsung S9 Enterprise Edition: Nooca Galaxy S9 ee shirkadaha. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan nooca sare ee shirkaddan oo si rasmi ah u timaadda Spain.
Abriil 19, ayaa la soo bandhigi doonaa qoyska cusub ee Motorola Moto G6
Motorola ayaa ku dhawaaqday casuumaad ay u fidineyso munaasabad lagu daahfurayo oo ka dhici doonta bishan Abriil 19keeda magaalada Sao Paulo, Brazil, dhowr layaab oo laga yaabo inay soo bandhigaan Motorola Moto G6 oo horeyba loo hadal hayey. Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta!
Google waxay ka saareysaa xaddidaadda tirada aaladaha aysan shahaado ka haysan shirkadda
Shirkadda mashiinka raadinta ayaa meesha ka saartay mid ka mid ah xaddidaadihii ay ku soo rogtay aaladaha aan shirkadda laga aqoonsaneyn.
Sameecadaha dhagaha ee ugu horeeya ee loo yaqaan 'OnePlus wireless earbuds' waxaa loogu yeeri doonaa OnePlus Bullet Wireless waxaana lagu soo bandhigi doonaa OnePlus 6.
OnePlus waxay umuuqataa inay rabto inay madaxeeda ku dhejiso qaybta headphone-ka wireless waxayna bilaabi doontaa OnePlus Bullet Wireless oo ay weheliso OnePlus 6
Sharafta 10 waxaa la soo bandhigi doonaa 15-ka Maajo
Sharafta 10 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa 15-ka May. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida ee dhamaadka-sare sare ee sumadda Shiinaha ee dhawaan suuqa soo galaysa.
OnePlus 6 ayaa ogolaan doona in la qariyo qormooyinka sida Huawei P20
OnePlus 6 ayaa waliba ogolaan doona in la qariyo shaashadda shaashadda. Raadi wax badan oo ku saabsan go'aanka shirkadda si loogu oggolaado isticmaaleyaasha inay qariyaan shaashadda shaashadda.
La shaandheeyey tixgelinta ugu horreysa ee HTC U12
Ka dusay naqshaddii loo maleeyay ee HTC U12. Raadi wax badan oo ku saabsan dhamaadka-sare ee shirkadda la bilaabi doono gugaan suuqa oo aan horeyba u haysanay naqshadiisa
Xiaomi Mi Mix 2S ayaa lagu iibiyay Shiinaha
Xiaomi Mi Mix 2S wuxuu ka dhammaanayaa keydkiisii ​​oo dhan Shiinaha. Raadi wax badan oo ku saabsan guusha iibka taleefanka sumadda Shiinaha ee horay loogu iibiyay dukaamada waddankaaga.
Shaandheeyay sawirradii ugu horreeyay ee mobile-ka Xiaomi gamer
Sawiradii ugu horreeyay ee Xiaomi ee Black Shark ayaa la helay. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka gamer ee astaanta Shiinaha, oo sawirradiisa ugu horreeya ay horeyba u ahaayeen run.
Maamulaha OnePlus wuxuu shaaca ka qaadayaa qeexitaanada qaar ee OnePlus 6
Maamulaha guud ee OnePlus wuxuu bixinayaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan OnePlus 6. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka sare ee ugu dhakhsaha badan ee dhowaan suuqa soo gali doona oo aan hore u ogaanay macluumaad dheeri ah.
OnePlus waxay mar kale lashaqeysaa Disney si ay u bilaabaan daabacaad gaar ah filimkii ugu dambeeyay Avengers
Shirkadda Aasiya ee OnePlus, ayaa mar kale heshiis la gashay inay soo saarto daabacaad gaar ah oo calankeeda ah, inkasta oo markan munaasabadda lagu soo bandhigayo filimka xiga ee Marvel Studios The Avengers: Infinity Wars.
Shaandheeyey xogta ugu horeysa ee Xiaomi Mi Band 3
Xogtii ugu horeysay ee ku saabsan Xiaomi Mi Band 3 ayaa la helay. Raadi wax badan oo ku saabsan jijimada cusub ee sumadda Shiinaha ee la filayo in ay suuqa soo gasho sannadkan.
Shaandheeyay faahfaahinta ugu horreysa ee ku saabsan Galaxy S9 Mini
Shaaciyey qeexitaannada ugu horreeya ee Galaxy S9 Mini. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee Samsung kaas oo qeexitaannada qaarkood horeyba loo shaaciyey
Galaxy A6 iyo A6 + waxay helayaan shahaadada FCC
FCC waxay cadeyneysaa Samsung Galaxy A6 iyo Galaxy A6 +. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefannada dhexdhexaadka ah ee cusub ee shirkadda soo saaraha Kuuriyada Koofureed ee horay loo xaqiijiyay
Xiao AI: Kaaliyaha Xiaomi ee sirdoonka farsamada ayaa durba dhab ah
Xiao AI: Kaaliyaha Xiaomi durba waa mid ka jirta Shiinaha. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan kaaliyaha dalwaddii ee sumadda Shiinaha ee ku saleysan sirdoonka macmalka ah ee horeyba si rasmi ah looga bilaabay Shiinaha.
Dhammaan qeexitaannada farsamo ee Nokia 9 waa la sifeeyey.
Nokia 9 ayaa mar kale la daadiyay iyadoo ay weheliso dhamaan astaamaheeda iyo qeexitaankiisa farsamo taas oo umuuqata inaan si xoog leh u aamini karno maxaa yeelay waxay xaqiijinayaan dhowr tayo oo lagu xaman jiray tan iyo markii la aas aasay, sida, tusaale ahaan, kaamirada sadexda ah ee ay wadato iyo SoC SD845 in ay fuusho.
La kulan Lava Z91, mobilada cusub ee dhamaadka-hooseeya ee gaadha suuqa Hindiya
Lava markan wuxuu ina keenayaa Lava Z91, oo ah aalad hooseysa oo Android ah oo timid India maalmo yar uun ka hor iyadoo u harraadsan guul iyo macaamil aqbalaad. Waxay ku imaaneysaa 5.7-inch HD + bandhigay, 1.3GHz afar geesle ah Mediatek SoC, 3FB RAM, iyo inbadan.
Qeexitaannada iyo astaamaha Sharafta 7A, shirkadda dhammaadka-hoose ee shirkadda
Waxaan kuu soo bandhigeynaa Sharafta 7A oo ay weheliso dhammaan qeexitaankeeda! Qalabkani wuxuu ku yimaadaa qalab dhowr dabeecadood leh oo siinaya heerka ugu hooseeya, inkasta oo cagtiisa badh ay tahay bartamaha-dhexe sababtoo ah nidaamka qalliinka ee uu isticmaalo, shaashad aad loo aqbali karo, celcelis batteri, iyo in ka badan. Waan kuu balaarinay!
Blackview P10000 Pro waxaa lagu heli karaa qiimo qaas ah oo ku saabsan dhiirrigelintan
Blackview P10000 Pro: Waxaa lagu heli karaa qiimo qaali ah Aliexpress. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka saxiixa oo hadda lagu heli karo qiimo gaar ah dukaanka caanka ah.
Shaandheeyay qeexitaanka Xiaomi Mi A2
Shaandheeyay qeexitaanka buuxa ee Xiaomi Mi A2. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee ka imanaya astaanta Shiinaha si aad u hesho Android One oo xagaagan suuqa soo gali doona.
Sifeeyay sedexda nooc ee OnePlus 6
La shaandheeyey qiimaha noocyada OnePlus 6. Soo ogow qiimaha noocyada kala duwan ee taleefanka sare ee soo saaraha Shiinaha ay yeelan doonaan marka ay suuqa ku dhacdo dhawaan.
Samsung ayaa cusbooneysiisa Had iyo jeer On Display waxayna bixisaa taageerada GIF ee Galaxy S8 iyo Note 8
In muddo ah hadda, gaar ahaan isticmaalayaasha adeegsada Telegram halkii ay WhatsApp ka ahaan lahaayeen ...
Xiaomi ayaa bilaabi doonta taleefan casri ah oo ay la socoto Helio P60 qeybta labaad
Xiaomi waxay ku shaqeysaa taleefan Helio P60 oo ah processor. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshayaasha sumadda Shiinaha ee bilaabaya taleefanka ay la socoto processor-ka MediaTek gudaha.
Samsung waxay ku cusbooneysiisaa Gear S2 astaamo cusub
Waxaa la yaab leh, in ragga Samsung ay hadda soo saareen cusbooneysi cusub oo loogu talagalay Gear S2, iyagoo ku daray tiro badan oo shaqooyin ah iyo sidoo kale isbeddello qurxin.
Huawei wuxuu rukhsad u leeyahay taleefan la laaban karo oo noqda kaniini
Shirkadda Huawei waxay soo martay taleefan jilicsan oo isu beddelaya kiniin. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan patent-ka nooca Shiinaha ee hadda ka shaqeeya taleefanka noocan oo kale ah oo ay tahay inuu suuqa ku dhufto dhowaan.
Motorola Moto G6 iyo G6 Play ayaa si buuxda u soo dusay
Moto G6 iyo G6 Ciyaar: Qeexitaannada, qiimaha iyo naqshadeynta ayaa xaday. Raadi wax badan oo ku saabsan telefoonada cusub ee sumcadda lagu wado in dhowaan laga soo saaro suuqa laakiin kuwaas oo aan hore u ogaanay naqshadeynta iyo qeexitaanadooda.
Meizu wuxuu shatiyeyaa shidma cusub oo faraha lagu dhajiyo oo loogu talagalay dhammaan taleefannada shaashadda
Meizu wuxuu rukhsad u leeyahay nidaam cusub oo lagu aqoonsado faraha. Raadi wax badan oo ku saabsan patent-ka cusub ee nooca Shiinaha ee soo bandhigaya hab cusub oo lagu aqoonsado faraha shaashadda taleefanka.
Sirdoonka macmalka ah ee Huawei P20 ayaa imaan doona Mate 10 iyo Mate 10 Pro
Mate 10 iyo Mate 10 Pro waxay lahaan doonaan sirdoonka macmalka ah ee Huawei P20. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefannada dhamaadka sare ee heli doona caqligan macmalka ah.